Aqoonkaab Maxaad Ka Taqaan Cudurka Cilmaaniyadda? | Aqoonkaab
Maxaad Ka Taqaan Cudurka Cilmaaniyadda?
Jun 17, 2017Arrimaha islaamka
Cudurka cilmaaniyaddu waa cudur beddela oo geddiya hab-fekerka maskaxda aadamaha. Wuxu kharibaa oo khalkhal ku furaa waxa ugu wayn ee qofku qiimeeyo – diinta.
Cudurkani waa saf-mareen si fudud u faafa. Waxa la isugu gudbiyaa siyaabo kala-geddisan oo ay ugu tun wayn yihiin qoraalka iyo u fiirsashada bulshooyinka kale dhaqamadooda adiga oo aan eegayn xaaladaha, dhaqamada iyo wadciga bulshooyinkaas ku riixay inay qaataan cilmaaniyadda. Tusaale ahaan, waxa aad arkaysaa ruux ku doodaya in cilmaaniyadda iyo ku-lammaanayaasheeda Bulshooyinka Galbeed ku liibaaneen sidaa daraadeedna ay tahay furah liibaanta ee qoom iyo qolo kasta. Taasi sax ma noqon karto, sababtoo ah kabo loo fuudhiyay oo loo tolay qof kale adi kuma le’ekaan karaan. Waa suuro gal in isbedel kale oo maskaxeed ama dhaqameed u beddeli karo hab-nololeedkeena.
Astaamaha cudurkan lagu gartaa waxay u qaybsamaan labo: qaar hor-dhac ah iyo kuwa asal ah oo gaamuray. Ugu horaynta qofka waxa la nacsiinayaa qaab-dhaqanka Umadda Islaamka, ha noqoto mid siyaasadeed, bulsho ama dhaqaale. Wuxu sannifayaa wixii luuqadda Carabiga iyo dadka asal ahaan Carab ka soo jeeda. Taasi waxay ku riixaysaa inuu ka xajiimoodo oo nacayb u qaado culimada Islaamka. Marka uu qofka cudurkan qabaa heerkan gaadho, waxa bedelmay hab-fikirkiisii sidaa daraadeed way adagtahay inuu soo laabto. Wuxu bilaabayaa inuu ka tanaasulo ku dhisidda noloshiisa diinta. Wax kasta wuxu damcayaa inuu caqli iyo ‘logic’ ku kala saaro isaga oo u arkaaya in diintu aanay la jaanqaadayn xawaaraha isbeddel ee noloshiisa. Taasi waxay u gudbinaysaa inuu aamino in diinta ay ku kooban tahay goobaha cibaadada iyo xilliyada cibaadada faralka ah.
Daaweyntiisu iyo ka hortagiisa waxa ka mid ah in aanad xakamaha u sii dayn caqliga, sababtoo ah caqliga iyo ‘logic’ gu keli ahaantood waxay dafiraan waxyaalo aad hubto inay jiraan, sidaa daraadeed sax ma aha weligood. Waa in aad barato diinta oo maktabadaada gaar ahaaneed ee akhris buugaag diimeed ku ilaaliso. Buugta falsafadda galbeedku waa ilma-aragtayga gudbiya jeermiska keena cudurkan, sidaa daraadeed waa in aad feejignaan ku akhridaa ama u kaadisaa akhriskooda illaa aad dhismayso diin ahaa.
Xigasho: Abdirahman Abdilahi
Previous PostDhaawaca kediska ah ee ku yimaada kilyaha Next PostCeel Uu Dar Alle U Bixiyey Asxaabigii Weynaa Ee Cismaan Bin Cafaan Oo Weli La Intifaacsado